Home » Lahatsoratra farany farany » Hotels & Resorts » Sandals Foundation Manentana ny Fanantenana Vaovao any Jamaika
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Karaiba • Hospitality Industry • Hotels & Resorts • Vaovao Mafana Jamaika • Vaovao • tompon'andraikitra • Tourism • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • malaza ankehitriny
Ny Sandals Foundation dia mino fa hery afaka mamindra tendrombohitra ny hetsika mitondra fanantenana. Ny fanantenana, amin'ny endriny tsotra indrindra, dia afaka manentana ny asa sy ny hery ary manova tsara ny saina sy ny fihetseham-po.
Ny Fondation dia fikambanana tsy mitady tombony natomboka tamin'ny Martsa 2009 mba hanampiana ny Sandals Resorts International hanohy hitondra fiovana any Karaiba.
Ny fandaniana rehetra mifandraika amin'ny fitantanana sy ny fitantanana dia tohanan'ny Sandals International.
Ny 100% amin'ny dolara rehetra omena dia mandeha mivantana amin'ny famatsiam-bola amin'ny hetsika misy fiantraikany sy manan-danja eo amin'ny sehatry ny fanabeazana, fiaraha-monina ary tontolo iainana.
Misy tetikasa Sandals Foundation manerana ireo nosy misy kapa no misy. Androany, mifantoka amin'ny fanantenana nanentana ny fanahin'i Jamaika izahay.
Tetikasa any Jamaika
Fondation Sandals dia nanatanteraka sy nanohana tetikasa sy hetsika izay manohana ny fampandrosoana ny vondrom-piarahamonina eo an-toerana, ny fampivoarana ny fandaharam-pampianarana ary ny fiarovana ny tontolo iainana ao Jamaika.
Ny Sandals Foundation dia miasa ao amin'ny vondrom-piarahamonina afovoan-tanànan'i Flanker miaraka amin'ny mpianatra 300 eo ho eo izay mampiasa ny Justice Center isam-bolana. Ny Programa Afterschool Care and Extended Support (ACES) dia nampidirin'ny Sandals Foundation mba hiantohana ny tontolo iainana azo antoka sy voarafitra izay ahafahan'ny tanora tandindomin-doza avy amin'ny fiaraha-monina mandray soa avy amin'ny toro-hevitra sy ny fanoroana fanoloran-tena, fanohanana ara-pitarihana amin'ny entimody sy ny anjara andraikiny, ary ny fandraisana anjara amin'ny hetsika tolakandro manara-maso izay mandrisika ny fitondran-tena tsara ara-tsosialy.
Ny fandaharan'asan'ny Sandals/Flanker Training and Recruitment Tier dia nanome asa sy vatsim-pianarana, nampiantrano tsenam-pahasalamana ary nampiroborobo ny fanatsarana ny fahaiza-mamaky teny sy manoratra.
Programa fikarakarana nify sy maso tsara tarehy
Isan-taona, ny lisitr'ireo mpilatsaka an-tsitrapo dia ahitana ophthalmologists, optometrists, optician, teknisiana optika, mpitsabo mpanampy, ary mpilatsaka an-tsitrapo matihanina tsy miankina amin'ny maso avy any Etazonia sy Kanada mba handray anjara amin'ny toeram-pitsaboana mandritra ny herinandro izay azo atao amin'ny fiaraha-miasa amin'ny Sandals Foundation sy ny hafa eo an-toerana. mpiara-miasa.
Niara-niasa tamin'ny Hopitaly Regional Cornwall ihany koa ny iCARE mba hanao fandidiana katarakta 50 maimaim-poana ho an'ireo tena sahirana.
Miaraka amin'ny programa Great Shape Dental and Eye Care dia nisy fiantraikany tamin'ny olona 150,000 mahery tao Jamaika.
Ny Sandals Foundation dia miara-miasa amin'ny Ministeran'ny Fambolena sy ny Jono, dia miasa sy mitantana tanteraka ireo toeram-pitsangatsanganana an-dranomasina roa ao Jamaika - ny Boscobel sy Whitehouse Marine Sanctuary.
Manampy amin'ny fanatsarana ny tahirin-trondro ao anatin'ny fitotongan'ny jono Jamaikana ireo toeram-pitsangatsanganana an-dranomasina, ary koa mampianatra momba ny lanjan'ny fitehirizana ny zavamananaina an-dranomasina sy ny fiveloman'ny mpanjono eo an-toerana.
Efa niasa tanteraka ny Sanctuary Boscobel nanomboka ny volana mey 2013 ary nitombo 333% ny biomass trondro tamin’ny taona 2015. Efa niasa tanteraka ny Sanctuary an-dranomasina Whitehouse nanomboka ny volana mey 2015.
Fiarovana ny sokatra
Mba haharetan'ity tetikasa ity, ny Sandals Foundation dia nanomboka fanentanana fanabeazana maro ho an'ny mpitsidika, ny mpikambana ao amin'ny ekipa ary ny ankizy mpianatra mba hahatakarana ny maha-zava-dehibe ny fiarovana ny sokatra sy ny anjara asan'ny tsirairay. Fanampin'izany, nomena fampianarana ireo mpikambana ao amin'ny ekipa ny amin'izay tokony hataony rehefa manatody ny sokatra amin'ny fananana Sandals na Beaches Resorts.
Ireo vahiny ao amin'ny faritr'i Ocho Rios dia afaka mandray anjara amin'ny fitsidihan'ny sokatra izay ahafahany mitsidika ny tora-pasika Gibraltar sy mianatra momba ny sokatra an-dranomasina sy ny zana-tsokatra an-dranomasina ary koa mijery azy ireo miverina any an-dranomasina.
Sandals Foundations dia miara-miasa amin'ny CARIBSAVE, Coral Restoration Foundation, ary ny Bluefield's Fisherman's fiaraha-monina sariaka amin'ny fananganana toeram-pambolena haran-dranomasina roa any Jamaika ao anatin'ny fitoerana masina an-dranomasina ao Bluefield sy ny toerana masina an-dranomasina Boscobel. Miara-mamboly haran-dranomasina maherin'ny 3,000 isan-taona ireo toeram-pambolena haran-dranomasina ireo. Ny toeram-pambolena haran-dranomasina Boscobel tantanin'ny Fondation Sandals dia efa namboly haran-dranomasina maherin'ny 700.
Nidina hatramin'ny 90% ny fandrakofana vato harana any Karaiba. Ny toeram-pambolena haran-dranomasina dia manampy amin'ny famerenana amin'ny laoniny ny fandrakofana ny haran-dranomasina amin'ny alàlan'ny fitomboan'ny vatohara salama sy mitombo haingana fambolen-kazo indray eny amin'ny haran-dranomasina. Izany dia manampy amin'ny fiarovana ny morontsiraka amin'ny fikorontanan'ny fiainana an-dranomasina ary koa ny fiarovana ny morontsiraka.
Ny Sandals Foundation dia nanomboka tetikasa fanentanana mialoha mitondra ny lohateny hoe Project Sprout. Ny Tetikasa dia noforonina ho valin'ny filàna fandraisana an-tanana mialoha eo amin'ny ambaratonga fototra amin'ny rafi-panabeazana izay hisorohana na hanitsiana ny fahavononan'ny mpianatra tsy ampy.
Amin'ny alàlan'ny fidirana an-tsehatra kendrena, ny kalitaon'ny mpampianatra, ary ny fanatsarana ny fahombiazany, dia mihamatanjaka ny fahaiza-manaon'ny ray aman-dreny ary ny asa atao any an-tsekoly dia tafiditra ao an-tokantrano, manatsara ny tontolo fianarana. Ny Sprout dia mikendry ireo mpianatra 3-5 taona ary mavitrika amin'ny sekoly dimy: Leanora Morris Basic, Culloden ECI, Seville Golden Pre-School, King's Primary, ary Moneague Teachers College Basic School.
West End Sekoly zazakely
Ny Fondation Sandals miaraka amin'ny CHASE Fund dia niara-niasa tamin'ny famatsiam-bola ny fananganana ny Sekoly Zazakely West End ao Negril, Westmoreland. Ity hetsika ity dia vokatry ny faneken'ny Sandals Foundation ny filana andrim-panjakana hanohanana ny Fampianarana Fahazazana (ECE).
Tetikasa tohanan’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena (MOE) ny fananganana ny Sekolin’ny Zazakely any West End izay mamaly ny olan’ny fanavaozana ny fotodrafitrasa, ny toerana sahaza ary ny fiarovana ny ankizy ao an-dakilasy, ary ny filàna fanatsarana ny fahaiza-manao ara-pedagojika eo amin’ireo mpampianatra ao amin’ny faritra.
Ny Sekoly Zazakely vita dia hanome fahafahana ho an'ny ankizy 3-6 taona ao anatin'io vondrom-piarahamonina io sy ny manodidina azy mba hahazo fanabeazana tsara ho an'ny ankizy tany am-boalohany ao anatin'ny tontolo fianarana manohana.
November 13, 2021 amin'ny 14: 36
Amin'ny maha-mpanoratra fitsangatsanganana ahy, mahatsapa tsara kokoa aho momba ny Sandals mahafantatra ny ezaka ataon'izy ireo amin'ny fiaraha-monina manokana!